Ciidamada Al Shabaab Oo Wali Gacanta Ku haya Hoteelka Makka Al Mukarrama.
Friday March 01, 2019 - 07:31:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaal xooggan ayaa wali ka socda gudaha Hoteelka Makka Al Mukarrama iyo hareerahiisa kadib markii ay ciidamada Xarakada Al Shabaab ay xalay weerar xooggan ku qaadeen.
Jabaqda rasaasta ayaa laga maqlayaa dhanka wadada Makka Al Mukarramaha ee halbowlaha u ah isku socodka gaadiidka ay isticmaalaan madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dagaalyahannada Shabaabul Mujaahidiin ayaa si adag isaga caabiyay illaa iyo Afar weerar oo ay qaadeen maleeshiyaadka dowladda Federaalka iyo saraakiil caddaan ah oo dhowr jeer isku dayay in ay weerarka soo afjaraan.
Khasaaraha lixaad leh ayaa lasoo sheegayaa in ay ka dhasheen qaraxyadii aadka uxooganaa ee xalay ka dhacay afaafka Hoteelka, dagaalyahannada ka dagaallamaya gudaha Hoteelka ayaa la sheegay in ay toogasho ku dileen saraakiil farabadan oo deganaa qolalka VIP-da loo yaqaan ee Hoteelka.
Weerarka ayaa fadeexad dhanka amniga ah ku noqonaya xukuumadda Xasan Cali Kheyre oo bilihii lasoo dhaafay la daalaa dhacaysay taak darri dhan walba ah.
Waddooyinkii dhagxaanta lagu gooyay ee laga xiray gaadiidka dadweynaha iyo adeegsiga awoodda dheeriga aheyd ee ay sameeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waxay baajin waayeen weerarada ay Al Shabaab ku qaadayso dhismayaasha muhiimka ah ee kuyaal Xayndaabka dowladda.